Zimbabwe: U.S. Sanctions a Mugabe Legacy - Says Trump Official - allAfrica.com
Zimbabwe: U.S. Sanctions a Mugabe Legacy - Says Trump Official
The US government has not slapped President Emmerson Mnangagwa's administration with fresh sanctions but just carried over "targeted measures" from former President Robert Mugabe's excesses, a top official said Monday.
US Acting assistant secretary for African Affairs Don Yamamoto told journalists from across the world including Zimbabwe during a telephonic briefing on Secretary of State Rex Tillerson's African visit that his Washington recognises Mnangagwa's government despite the nature by which he came to power.
"When the transition from (former President Robert) Mugabe to Mnangagwa happened, SADC countries as well as the African Union (AU) held high hopes that this will be the start of really making profound economic and political reforms," said Yamamoto.
"We are looking at how we can work with Zimbabwe. Our ambassador Harry Thomas has met with President Mnangagwa not just on the future of Zimbabwe but also the role Zimbabwe plays."
"As far as our overall relationship with Zimbabwe as our embassy has stated, we look at the post-Mugabe period as an opportunity to move Zimbabwe forward on fundamental economic and political reforms."
"Sanctions are always under review and, as Zimbabwe engages more on the economic reform front, stronger institutions and democratic processes I think you will see a lot more opening on both sides."